It is me. Ko Niknayman.: စတေးခံပြီး..မျိုးချစ်စိတ်တွေ ပြသနေပြီ။
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ဆိုတာ..သမိုင်းစဉ်ဆက်..တပေါင်းလပြည့်နေ့ မှာ..ဘူရားပွဲတော်ဆင်နွဲမြဲပါ။ လူသူ အပေါင်း လည်းကြက်ပျံမကျ စည်ကားသိုက်မြိုက်တဲ့ တကဲ့ သာသနာ့ ၀တ္တကမြေပါ.
လေးဆူဓါတ်ပုံ လို့ အမည်ရတဲ့..စေတီတော်မြတ် ဟာ.
မြန်မာနိူင်ငံရဲံ သမိုင်းအဆက်ဆက်..တိုက်ပွဲဝင် သူရဲကောင်းများရဲ့ အောင်မြေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလိုနီခေတ် ကျောင်းသားသပ်ိတ်မှောက် ကျောင်းသားများ ဆွေးနွေး စုရူံးသော နေရာရဲ့ အထိမ်းအမှတ် ကျောက်စာဟာ..ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ အထင်ကရရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အလယ်ပစ္စယံ မိန့်ခွန်း။..ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ရဲ့ အနောက်ဘက်မုခ် မိန့်ခွန်းတွေဟာ..သမိုင်းမေ့မရ အဖြစ်အပျက်တွေပါ။ ၂၀၀၈ တော်သလင်း လပြည့်မှာ..ဗဟန်းမုခ်မှာကျခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးရဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ သွေးစက်တွေ နဲ့ကျမျက်ရည် က..စစ်အာဏာရှင် စံနစ်ဆိုးရဲ့ သမိုင်းသက်သေရှိပါတယ်။
ဒီအပြင် ရွှေတိဂုံ ရဲ့ သမိ်ုင်းဝင်ကာလတွေထဲမှာ..ယခုနှစ်ရဲ့ ..တပေါင်းလပြည့်နေ့ ဟာလည်း အပါအ၀င်အဖြစ် ကျန်ရစ်မှာပါ။
၂၀၀၈. တပေါင်းလပြည့်နေ့ ည ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ် ခန့်က ရွှေတိဂုံဘုရား သောကြာထောင့်မှာ အသက် ၃၀ ကျော် လူငယ်တဦး ဆီမီးခွက်မှ မီးဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဓာတ်ဆီလောင်းကာ မီးရှို့ခြင်းဖြင့် စစ်အာဏာရှင် များရဲ့ လက်အောက်မှာ..နေထိုင်ရတဲ့ လူငယ်များရဲ့ စွန့် စားရဲတဲ့ သတ္တိ..အကြောင်း..သက်သေပြသခဲ့ပါတယ်။
့မြန်မာလူမျိုး..ဗုဒ္ဓဘာသာတဥိးဟာ.. မိမိ ကိုယ့်ကိုယ် ကို သတ်သေတဲ့ ကိစ္စကို အလွန် မှားယွင်း အပြစ်ရှိပြီး အ ဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ ဖြစ်လေရာ ဘ၀တိုင်းမှာ အပြစ်ပြန်ခံရပါတယ် လို့ ဆိုရိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုလို..လူတွေအလည်ခေါင်...သာသနာ့ ဝတ္တကမြေပေါ်.မိမိကိုယ်မီးရှို့ စတေးခံ.ပြသခဲ့တဲ့ ဤစိတ်ဓါတ် လုပ်ရပ်ဟာ..သာမန် နယ်နယ်ရရ..ပေးဆပ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ.
(၁) စစ်သံဖနောင့် အောက်မှာ..ကျီးလန့် စာစားနေရသော..ဘ၀များထက်စာလျှင်..သေသော်မှ ကောင်းသေး၏ ဆိုတာ ပြသခဲ့ခြင်း။
(၂).အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ ပြန်ငရဲခံရပါသော်ငြား..မကြောက်မရွံ့အမျိုးဘာသာ..သာသနာ ကို..မြန်မာလူမျိုး..မျိူးချစ်သားကောင်း ဗုဒ္ဓ ဘာသာ၏ ဥပကာကောင်း..အဖြစ်အသက်စွန့် ရန်..မြန်မာများ အဆင်သင့် ရှိနေ ပြီဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူတယောက်၏ အကြောက်ရွံ့ ဆုံးအရာဟာ...သေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
သေရင်မကြောက်သောသူများ..ယုံ ကြည် ချက်အတွက်..သေရဲသူများ ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တိုင်း ပြည်..ကိုလိုနီ သူ့ ကျွန်ဘ၀ကလွတ်မြောက်ခဲ့တာပါ။ သေခြင်းအတူတူ..တယောက်ချင်း အချည်းနှီး မသေ သင့်ဘဲ..တော်လှန်ရေးအတွက်..တပ်သားကောင်းများအဖြစ်..ရဲရဲဝံ့ ဝံ့ သေရဲ..ရင်ဆိုင်ရဲဖို့ သာအရေးကြီး ပါသည်။
မည်သို့ ပင် ဖြစ်စေ..ယခုလုပ်ရပ်သည်..အာဏာရှင်များအတွက်.အသက်စွန့် အသေခံပျားလိုတုတ်..မည့်မျိုးချစ် မြန်မာ များ..ပေါ်ထွန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း စစ်အာဏာရှင်အား သတင်းပေးပို့ သည့်..ကနဦး နိမိတ်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ကျွန်တော် သုံးသပ် ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။
Posted by အာဇာနည် at 1:48 PM